गौरीशङ्करको खुद नाफा २६ प्रतिशत वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home लगानी गौरीशङ्करको खुद नाफा २६ प्रतिशत वृद्धि
गौरीशङ्करको खुद नाफा २६ प्रतिशत वृद्धि
वैशाख २९, काठमाडौं (अस)। गत १ वर्षको अवधिमा गौरीशङ्कर विकास बैङ्कको खुद मुनाफामा २६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १ करोड ४० लाख रहेको बैङ्कको खुद नाफा चालू आवको सोही अवधिमा रू. १ करोड ७६ लाख पुगेको छ । बैङ्कले प्रकाशन गरेको चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा सो तथ्य उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा बैङ्कको ब्याज आम्दानी झण्डै शतप्रतिशतले वृद्धि भएकाले खुद मुनाफामा वृद्धि भएको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. १४ करोड रहेको बैङ्कको चुक्ता पूँजी ५० प्रतिशतले बढेर अहिले रू. २१ करोड पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आवको अन्त्यसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजी तोकिएको न्यूनतम सीमासम्म पुर्याउन निर्देशन जारी गरेकाले बैङ्कले पूँजी वृद्धि गरेको बताएको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैङ्कको निक्षेपमा २३ दशमलव ४४ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ५५ करोड ७२ लाख पुगेको छ । बैङ्कको कर्जा तथा सापटीमा पनि १४ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५५ करोड ५२ लाख पुगेको विवरणमा उल्लेख छ । गत चैत मसान्तमा बैङ्कको कर्जा-निक्षेप अनुपात ६७ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत नाघ्न नहुने प्रावधान राखेको छ । यस बैङ्कले उक्त सीमा ननाघेको अवस्था त रामै्र हो । तर, यसले के पनि देखाउँछ भने निक्षेपमा भएको वृद्धिअनुसार कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छैन । त्यसकारण अतिरिक्त रकम निष्क्रिय रहन गई कमाइ गर्ने अवसर गुम्न जान्छ । तसथ यस बैङ्कले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि गरी थप मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ । साथै के पनि विचारणीय छ भने समीक्षा अवधिमा बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १ दशमलव ३० प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भई ३ दशमलव २२ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ नयाँ ऋण प्रवाह गर्दा बढी चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ किनभने यो अनुपात थप बढयो भने बैङ्कलाई त्यो निकै महँगो सावित हुनेछ ।
बैङ्कले समीक्षा अवधिमा घरजग्गा कर्जामा ४६ दशमलव ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा घरजग्गा कर्जामा रू. ६ करोड ९३ लाख प्रवाह भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ३ करोड ७१ लाख मात्र प्रवाह भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा सीमा निर्धारण गरेपश्चात् बैङ्कले प्रवाह गरेको घरजग्गा कर्जामा भारी कटौती गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा २०६८ साल असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म घरजग्गा कर्जामा प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान तोकेको छ । हाल बैङ्कले कुल कर्जाको ६ दशमलव ६७ प्रतिशत रकम मात्र घरजग्गा कर्जाका रूपमा प्रवाह गरेको तथ्य प्रकाशन गरेको छ । गत आवमा रू. ५ करोड २९ लाख कर्जा रकम व्यक्तिगत घर कर्जाका रूपमा प्रवाह भएकोमा चालू आवमा रू. २१ करोड ९० लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको तुलनामा यस आवको तेश्रो त्रैमासिक अवधिमा आवधिक कर्जामा १ सय प्रतिशत वृद्धि भएको छ । तर, सोही अवधिमा अधिविकर्ष कर्जामा ७० प्रतिशत कमी आएको छ । हाल बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ १६ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय १४ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको पनि बैङ्कले जनाएको छ । बैङ्कको चालू आवको तेस्रो त्रैमास अन्त्यको बजार मूल्य रू. १ सय ३९ को आधारमा बैङ्कको मूल्य-आम्दानी अनुपात १२ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ यस बैङ्कको शेयर अहिले उचित मूल्याङ्कन भएको छ ।